ကလေးဌာန | ဘမ်ရွန်ဂရက် ဆေးရုံကြီး
ဘမ်ရွန်ဂရက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆေးရုံကြီးရှိ ကလေးဌာန၏ အောက်ဖော်ပြပါ အထွေထွေကလေးဆရာဝန်များနှင့် ကလေးအထူးကုများမှ ကလေးလူနာများအတွက် အထူးဝန်ဆောင်မှုများပေးလျက်ရှိပါသည်။
ကလေးနှင့် ဆယ်ကျော်သက် စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်
ဘမ်ရွန်ဂရက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆေးရုံကြီး၏ ကလေးဌာနရှိ ရင်သွေးငယ်ကျန်းမာသန်စွမ်းရေးဌာနသည် အောက်ဖော်ပြပါဝန်ဆောင်မှုများ ပေးလျက်ရှိပါသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ ကလေးအထူးကုသမားတော်များအဖွဲ့နှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ပြဌာန်းထားသော ကလေးများအားလုံးထိုးထားရမည့် မထိုးမဖြစ် သို့မဟုတ် အခြေခံကာကွယ်ဆေးများဖြစ်သည့် တီဘီရောဂါကာကွယ်ဆေး (BCG)၊ ဆုံဆို့၊ မေးခိုင်နှင့် ကြက်ညှာချောင်းဆိုးကာကွယ်ဆေး (DTaP)၊ ပိုလီယိုကာကွယ်ဆေး၊ ပါးချိတ်ရောင်၊ ဝက်သက်၊ ဂျာမန်ဝက်သက် (MMR)၊ အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီပိုး ကာကွယ်ဆေး၊ ဂျပန် ဦးနှောက်အမှေးရောင်ကာကွယ်ဆေးနှင့် ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး။
ခုခံအားတိုးကာကွယ်ဆေးများဖြစ်သည့် သွေးတုပ်ကွေး ဘီ ကာကွယ်ဆေး၊ ရိုတာဗိုင်းရပ်စ် ကာကွယ်ဆေး၊ တုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေးနှင့် IPD ကာကွယ်ဆေး
မိမိနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်သွားရောက်မည့် နိုင်ငံခြားသားကလေးများ သို့မဟုတ် ခရီးထွက်မည့် ကလေးများအတွက် ကာကွယ်ဆေးများ
မိခင်နို့ချိုတိုက်ကြွေးခန်း - မိခင်များမှ ၎င်းတို့၏ ရင်သွေးငယ်များကို တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် နို့ချိုတိုက်ကြွေးနိုင်ရန် သီးသန့်အခန်းများ
အထူးလိုအပ်ချက်ရှိသော ကလေးများအတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေးစင်တာ
ဘန်ရွန်ဂရက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆေးရုံကြီးရှိ အထူးလိုအပ်ချက်ရှိသော ကလေးများအတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေးစင်တာမှ အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာရှိသောကလေးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုနှောင့်နှေးသောကလေးများနှင့် အာရုံစူးစိုက်နိုင်မှု ချို့ယွင်းသောကလေးများအတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်သင်ကြားရေးတို့ကို ကလေးတစ်ဦးချင်းစီ၏ စွမ်းရည်ပေါ်မူတည်၍ သင့်တော်သည့် လုပ်ဆောင်မှုများဖြင့် သင်ကြားပေးလျက်ရှိပါသည်။ ဤသင်ကြားလှုပ်ရှားမှုများသည် ကလေးဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် အပြုအမူဆိုင်ရာ အထူးပြုပညာရှင်များ၊ ကလေးကာယကုထုံးပညာရှင်များ၊ လုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာကုထုံးပညာရှင်များနှင့် ကလေးစိတ်ရောဂါပညာရှင်များမှ ကလေး၏အနာဂတ်သင်ယူရေးအတွက် အခြေခံဖြစ်သည့် ဖွံ့ဖြိုးမှုကို ကောင်းမွန်စွာ လှုံ့ဆော်နိုင်ရန် ဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်သည်။
ဘမ်ရွန်ဂရက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆေးရုံကြီးရှိ ကလေးမျက်စိဌာနမှ အောက်ဖော်ပြပါဝန်ဆောင်မှုများ ပေးလျက်ရှိပါသည်။
မျက်စိကျန်းမာရေး နှင့် အမြင်အာရုံစစ်ဆေးခြင်း
ယေဘုယျအားဖြင့် ကလေးအထူးကုသည် မွေးဖွားသည့်အချိန်၊ ၃ နှစ်နှင့် ၃ နှစ်ပြည့်ပြီး စသည့်အချိန်များတွင် မျက်စိချွတ်ယွင်းမှုများကို ခြုံငုံစစ်ဆေးလေ့ရှိပါသည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ ရောဂါကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းမှ ကလေးများ မျက်ကြောသေသကဲ့သို့ဖြစ်ပြီး မျက်စိတစ်ဖက်ဝေဝါးခြင်း၊ အမြင်အာရုံချို့တဲ့ခြင်းနှင့် အခြားမျက်စိဆိုင်ရာပြဿနာများမှ ကာကွယ်နိုင်ရေးအတွက် ကလေးများအားလုံး မျက်စိစစ်ဆေးမှုခံယူရန် အကြံပြုထားပါသည်။
ကလေးမျက်လုံးနှင့် မြင်လွှာဆိုင်ရာပြဿနာများအတွက် ရောဂါရှာဖွေခြင်းနှင့်ကုသခြင်း
မျက်စိတစ်ဖက်ဝေဝါးခြင်း၊ ပုံမှန်မဟုတ်သောအမြင်၊ မျက်စိစွေခြင်း၊ ပုံမှန်မဟုတ်သော မျက်ခွံ၊ မြင်လွှာနှင့်ဆိုင်သော ရောဂါများနှင့် အမြင်အာရုံကြောဆိုင်ရာရောဂါများ။
ရောဂါရှာဖွေစစ်ဆေးခန်း ၂၃ ခန်းကို အောက်ပါအတိုင်း ခွဲခြားထားပါသည်။
ပြင်ပလူနာစမ်းသပ်စစ်ဆေးခန်း ၁၆ ခန်း
ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းနှင့် ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းပြုလုပ်ရန် ရင်သွေးငယ်ကျန်းမာသန်စွမ်းရေးဌာနအတွက် ၅ ခန်း
မျက်စိစမ်းသပ်ခန်း ၂ ခန်း
Tel.+66 (0) 2011 3791
Tel.+66 (0) 2011 3785
Tel. +66 (0) 2011 7385
Tel. +66 (0) 2011 3792
Special Needs Children Development Center : Monday through Friday
By appointment only Saturday and Sunday : 8.30 am to 4:00 pm
Children’s Eye Center Daily : 8:00 am to 8:00 pm
Special Needs Children Development Center : Bumrungrad International Clinic (BIC) Building, 17th floor
Children’s Eye Center : Bumrungrad International Clinic (BIC) Building, 17th and 18th floors
Rating score 9.75 of 10, based on 81 vote(s)